Vetivety: Tantano mora foana ny fanarahan-dalàna amin'ny tranokalanao sy ny rindrambaiko | Martech Zone
Vetivety: Tantano mora foana ny fanarahan-dalàna amin'ny tranokalanao sy ny fampiharana anao
Asabotsy 1 Febroary 2020 Asabotsy 1 Febroary 2020 Douglas Karr
Miaraka amin'ny fiainam-pirenena sy ny fanarahan-dalàna momba ny data Lalàna momba ny fiarovana ny mpanjifa any California, ny hoavin'ny fanarahan-dalàna lalina sy iraisampirenena dia manjary marobe amin'ny lalàna tsy misy dikany. Aza diso hevitra aho, tsy manohitra ny fitsipi-pifehezana aho rehefa mitohy manodinkodina sy manararaotra ny angon-drakitry ny mpanjifa ny orinasa.
Ny fanantenan'ny orinasa kely sy manerantany hitazomana fa tsy mandany fotoana sy lafo fotsiny, dia mety hanimba orinasa. Indrindra indrindra raha manomboka mandeha amin'ny làlan'ny fanjakana tsirairay isika ary manana ny fitsipiny manokana. Iray amin'ireo toe-javatra ireo izay mitaky fenitra iraisana nifanarahana, iraisam-pirenena momba ny fiainana manokana sy ny fampiasana angona.
Termly dia serivisy iray hanampiana ireo orinasa mitazona tsara ny fampiharana sy ny tranokalan'izy ireo mifanaraka amin'ny fitsipika rehetra tokony harahin'ny orinasa.
Ny fampandehanana orinasa dia mitaky anao hanaraka lalàna, lalàna, ary torolàlana amin'ny mpanome tolotra isan-karazany. Sahirana sy loza mety hitranga raha manandrana manaraka ireo fepetra rehetra ireo ianao. Ny fotoana fohy dia afaka manampy amin'ny fanalefahana ny enta-mavesatra amin'ny fanarahan-dalàna ary hanome anao fiadanan-tsaina.
Ny serivisy dia mampiditra sehatra fametrahana ho an'ny fitazonana ny teny sy ny tsiambaratelo momba ny tsiambaratelo ary koa ny torohevitra ara-dalàna hahazoana antoka fa mifanaraka ny orinasanao. Ara-potoana dia ahitana:
Vahaolana rehetra momba ny faneken'ny cookie rehetra
Cookie Checker - Ny mpanamarina cookie maimaim-poana an'i Termly dia mizaha ny tranonkalanao amin'ny cookies ary manampy anao amin'ny fanasokajiana azy ireo amin'ny fanarahan-dalàna GDPR sy Cookie Law ao anatin'ny minitra vitsy.
Generator momba ny cookies cookie - Vantany vao voasokajy ny cookies anao dia hamorona politika cookie ho azy mifanaraka tsara amin'ny orinasao i Termly.
GDPR Cookie Banner - Manangona mora foana ny fahazoan-dàlan'ny mpampiasa ary mijanona ho mifanaraka amin'ny torolàlana GDPR sy ePrivacy miaraka amin'ny sora-baventy azo ekena cookie izay namboarin'i Termly.
Miteraha ny politikanao Cookie
Generator ny fepetra sy ny fepetra an-tserasera
Natao ho an'ny orinasanao - Miterà fepetra sy fepetra natao ho an'ny bilaoginao, tranokalanao, fampiharana, SaaS, na tranokala ecommerce anao. Mametraha torolàlana sy zony ho an'ny sehatrao.
Customizable - Aza mipetrapetraka amin'ny fepetra sy fepetra mahazatra rehefa azonao atao ny manamboatra ny fijery sy ny fahatsapana ny fehezanteny hifanaraka amin'ny fomban'ny tranokalanao na ny app anao.
Web Hosting maimaim-poana - Hampiantrano ny fe-potoana sy fepetrao maimaimpoana i Termly! Mametraha rohy fotsiny eo amin'ny tranokalanao mba hahafahan'ny mpampiasa mampiasa ny pejy momba anao sy ny fepetra.
Miteraha ny fepetra sy ny fepetra an-tserasera
Mpanamboatra politika momba ny tsiambaratelo
Multiple Platforms - Na mitantana bilaogy ianao, tranokala ecommerce, fampiharana iPhone, fampiharana Android, na fampiharana Facebook, dia voasaron'ny orinasa mpamokatra politika i Termly ny orinasanao.
GDPR-mifanaraka tsara - Mamorona politika manokana mba hihaonana amin'ny torolàlana momba ny GDPR, ary koa ny Google Play, Analytics, Adsense, ny App Store, sy maro hafa!
Fanavaozana mandeha ho azy - Isaky ny mivoaka ny lalàna vaovao, ny ekipan'ny mpisolovava Termly dia hanavao avy hatrany ny politikanao momba ny tsiambaratelo, hahazoana antoka fa manara-dalàna ianao.
Mamorona ny politikanao manokana
Generator fanilihana ara-dalàna
Natao ho an'ny orinasanao - Na inona na inona politika famoahana ilainao - manomboka amin'ny fanilihana mpitsabo na fidirana mankany amin'ny fanesorana bilaogy fototra - mpamorona maimaimpoana an'i Termly no norakofanao.
Customizable - Ampiasao ny karazan-tsafidy style an'i Termly hanamboarana ny fanesorana anao hifanaraka amin'ny endrika sy zavatra tsapa amin'ny orinasanao, bilaoginao, na app anao, noho izany dia eo foana ny marikao.
Mora alefa - Sorohy ny andraikitra ara-dalàna sy ny fitarainana amin'ny alàlan'ny fanamorana ny fahazoana miditra mora foana ny politikam-panazavana. Apetaho fotsiny ny rohy mba hanampiana ny pejy fanesorana ny tranokalanao.
Miteraha ny fanilihanao ara-dalàna
Famerenam-bola sy famerenana ny politika
Natao ho an'ny orinasanao - Ny mpamorona politika miverina an'i Termly dia mampifanaraka ny politika tsirairay manokana amin'ny sehatra misy anao, tsy maninona ny habe, ny karazany na ny toerana misy ny orinasa iasanao.
Customizable - Aza atao sorona ny marika fivarotanao - Ny safidy namboarin'i Termly dia ahafahanao mampifanaraka ny fijery sy ny fahatsapana ny volanao amin'ny volanao.
Mora alefa - Ny fanomezana ny mpanjifa politika feno momba ny fandefasanao, ny fifanakalozana, ny fiverenanao ary ny famerenam-bola dia mora toy ny fametrahana rohy amin'ny tranokalanao.
Mamorona ny volanao amin'ny famerenam-bola sy ny politikanao
Fampahalalana: mpiara-miasa aminay i Ara-potoana